रिलायन्स लाइफले माग्यो चारदर्जन बढी कर्मचारी Bizshala -
काठमाण्डौ । रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमीटेडले करिब चारदर्जन कर्मचारी मागेको छ ।
यो जीवन बिमा कम्पनीले चिफ फाइनान्सियल अफिसर, एजेन्सी च्यानल एड, बैंकासुुरेन्स हेड, लिगल डिपार्टमेन्ट हेड, रिसर्च एण्ड प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट म्यानेजर, कर्पोरेट अफेयर्स, डिजिटल मार्केटिङ र ब्राण्डिङ अफिसर, रिइन्स्योेरेन्स अफिसरमा कर्मचारी मागेको हो ।
यसैगरी, ११ शाखाका लागि ब्राञ्च म्यानेजर, एकजना एक्जुुक्यूटिभ सेक्रेटरी, केही म्यानेजमेन्ट टेनी, फाइनान्सका लागि केही जुनियर असिस्टेन्ट, सेल्स, मार्केटिङ, ब्राञ्च अपरेसनका लागि केही जुनियर असिस्टेन्ट मागेको छ ।
इन्स्योरेन्सले प्रकाशित गरेको विज्ञापन यस्तो छ:
reliable life insurance new job
सातै प्रदेशमा रोजगार संयोजकको छनोट, को-को सफल भए ?(सूचिसहित)
काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विद्युतीय...
वायु सेवा निगमले एकैपटक माग्यो १७४ कर्मचारी, कुन पदमा कति ?
काठमाण्डौ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगमले एकैपटक १ सय...
मेगा बैंकले एकैपटक माग्यो १०५ कर्मचारी, कुन पदमा कति ?
काठमाण्डौ । मेगा बैंक लिमीटेडले एकैपटक १०५ कर्मचारी मागेको छ...
रोजगार संयोजक बन्न मरिहत्ते, ७५३ जनाको कोटामा २४ हजार बढीको
काठमाडौँ । प्रत्येक स्थानीय तह मातहत रही सञ्चालन हुने रोजगार सेवा...
बेरोजगार हुनुहुन्छ? श्रीयोगले खोजी दिनेछ अवसर
काठमाडौं । के तपाईं तपाईं बेरोजगार हुनुहुन्छ ? श्रीयोग डटकममा...
दुई वाणिज्य बैंकसहित ४ बैंकले मागे २५० बढी कर्मचारी
काठमाण्डौ । बैंक तथा बित्तीय संस्थामा फेरि पनि जागिरको बग्रेल्ती...
काठमाण्डौ । एनआईसी एशिया बैंक लिमीटेडले एकैपटक निकै ठूलो संख्यामा...
एसबीआई र लक्ष्मी लगायतका बैंकमा सयौंका लागि जागिर खुल्यो,
काठमाण्डौ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा सयौं संख्यामा जागिरको...